Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) (1956kii – 1987kii) 5aad | Warsugan News
Home Maqaalo Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) (1956kii – 1987kii) 5aad
Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) (1956kii – 1987kii) 5aad
Dec 14, 2015Maqaalo
1.	Yaxye Cabdiraxmaan Sheekh Cabdillaahi, Ina-abtigii, Maxamad Ibraahin Geeddi,
2.	Cumar Aadan Cawaale,
3.	Ismaaciil Cabdi Taani,
4.	Dayib Cali Nuur,
5.	Xaashi Gahayr,
Ka-sokow in uu Mujaahid ahaa, waxa kale oo ka muuqday dhaqan-halgameedkiisii in uu ahaa kacdoon-huriye ama waxan afka Ingiriisiga lagu yidhaahdo ‘Revolutionry’ aamminsana oo ku dagaallamay kacdoon iyo gadood dadweyne, sidaana naftiisii ku sadqeeyay. Wuxu ahaa qaab cusub oo horumarsanaa oo aan is-leeyahay malaha SNM, haddii ay halgankaas kuu sii jiri lahayd, waa ay u-digo-rogan karaysay, haddi aanay hoggaan-xumo ku dhicin.
Xilligaa uu Jabuuti uga soo ambo-baxayay ka-qayb-galka halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee ay SNM horseedka ka ahayd, ka-sokow in uu go’aansaday in uu naftiisa huro, Mujaahidiintii ay maalintaa wada socdeen qaar ka mid ah ayaa ii sheegay in af-duubkii diyaaraddii Somali Airlines ee Adis-ababa la soo dejiyay 11984kii ay sii dhiirri-gelisay.
“Alle ha u naxariistee Bashiir markii uu Jabuuti ka soo degay waxa uu haystay waraaqo Jabuuti ah oo ah nooca la yidhaahdo Kaar-dameer oo muwaaddin buuxa ma uu ahayn. Waxa weeyaan qofka sidaas ahi ma codeyn karo lamana dooran karo, laakiin wuxu ahaan karaa muwaaddin ku shaqeysan kara ama wax ku qabsan kara. Warqadda noocaas ah ayuu haystay, ka-dib markii uu damcay ee uu doonay in uu SNM-ta ku soo biro, ayuu xafiiska iigu yimi, waxaana uu igu yidhi ii soo samee Fiisahii aan ku tegi lahaa Itoobiya, magacaygana ha igaga qorin. Waayo? Waxa aan haystaa waraaqahaas Jabbuuti oo way iga xumaanayaan. Ka-dib waxaan ku idhi, waa ok aniga ayaa magac kuu bixinaaya, magacayga ayaana aan magac kaaga dhigayaa magac, markaas ayaan ku idhi adiga waxa lagu yidhaahda Bashiir oo magacayga ayaan magac kaaga dheegayaa sidaas ayaana uu ku dhoofay, kuna yimid dalka markii dambena uu jabhaddii ugu soo biiray.Muddada aanu is-naqaannay horta may badnayn, farsamadiisuna waxa ay ahayd Wastaad, oo markii uu Jabuuti joogayba wastaad ayuu ahaa, wastaadnimo ayuu ku shaqeysanaayey se markii uu aniga ii imanaayey waa uu ka qancay wastaadnimada iyo waxaas oo waxa uu goostay in uu ku soo biro jabhadda, marka runtii wax aqoon ah oo badan isu maanan lahayn, waa uu isu kay sheegay, markii uu isu kay sheegayna waan gartay, marka wixiisana sidaas ayaan ugu bedelay oo aan magaca kalena ugu soo bixiyey, kuna yimi oo uu jabhadda ugu soo biiray Laydh gelinta iyo wastaadnimadana labadaba waa uu ku shaqeynaayey. Bashiir waxkhtigaa uu aniga ii yimi nin dhallinyaro ah dayuu ahaa oo runtii markaaba u muuqday in ay ka soo go’an tahay howshan in uu gallaa oo uu u soo badheedho. Warqaddiina waan raadin, waayo 15kii sanno ee u dambeeyey waraaqahaygii qol ayey ku xidhan yihiin.”
“…..Bashiir waxaanu annagu isugu nimid Jabhaddii SNM. Wuxu ka yimid Gebilay, waxaanan filayaa in ay ahayd 1985kii. Mujaahidkaasi, wuxu ii yimid isaga oo diyaarsan. Dadka qaar waa la tababaraa, qaarna iyaga oo tababaran ayey kuu yimaaddaan.”
Mujaahid Bashiir ma keli ama suke ayuu ahaa markii uu Mujaahid Muuse Biixi Cabdi u yimid? Muuse Biixi oo su’aashaa ka jawaabaya, ayaa yidhi:
“…..Ninkaa waxa gacanta ku hayey oo ay saaxiib ahaayeen Mujaahid Axmed Ibraahin oo loo yaqaannay Raage-bidaar. Mujaahid Bashiir ninkaas ayay saaxiib ahaayeen oo ay wada socdeen oo laba nin oo isku nooc ah ayay ahaayeen. Waxay ahaayen niman halganku ka dhab ahaa, niman naf-hurid u yimid oo iyagu ‘Commanda-rro’ ahaa, iyagu askar ah, Taliyeyaal ah, siyaasiyiin ahaa oo go’aan-qaadasho lahaa.”
Waa kan Mujaahid Muuse Biixi oo jawaabta su’aashaas inoo baacinayaa, waxaanu markanna yidhi:
“……Markaa ninkaasi wuxu ahaa nin dhuuban oo dadkan la yidhaahdo waa weyd ah. Wuxu ahaa nin dheer oo cas. Mujaahid Bashiir ma uu ahayn nin balwadeed oo waa uu ka duwanaa badanka Mujaahidiinta oo had iyo jeer qaadka iyo sigaarka ku waallaa. Mujaahid Bashiir qaadka wax yar ayuu ka cuni jiray. Ma uu ahayn nin kaftan iyo hadal badan, bal se wuxu ahaa nin ku mashquulsan halganka oo keliya oo aanay waxba u labayn. Isaga iyo Raage-bidaar waxay cajiib ku ahaayeen in aanay marnaba kuugu iman si ay kuu wareystaan oo ay kugu wareeriyaan ama kugu scel-celiyaanba: ‘Maxaa la yidhi?’ Afkoodu, ma uu aqoon weedhaas. Afkoodu wuxu yaqaannay oo qabatimay: ‘….Qorshe ayaan haynnaa, war sugan ayaanu soo helnay iyo waxaan ku talin lahayn.’ Intaa ka dib, waxay kuu soo qaddimaanba, waxay ahayd fikrad dagaal.”
Mujaahid Bashiir markii uu saldhigga yimidba, waxa la geliyay tababar yar. Waxa loo diray Dugsi Tababar oo gaar ah oo ay ciidammadii SNM ku lahaayeen meel koonfur-galbeed kaga beegan magaalada Qabri-bayax ee Kililka 5aad ee Itoobiya ee Soomaalida. Wuxu ahaa dugsi si gaar ah loogu tababari jiray ciidammada loogu talo-galay in ay magaalooyinka ka dagaallamaan ama waxan afka Ingiriisiga lagu yidhaahdo ‘Urban war.’ Dhallinyaradii dugsigaa wax ku baran jirtay ama lagu carbin jirayba, Bashiir waa uu ka yar weynaa. Dhallinyaradaa waxa ka mid ahaa Maxamed Weere, Cumar Miino iyo qaar kale oo badan.
Previous PostDaawo Magaalada laascaanood ee xarunta Gobolka Sool waxa soo gaadhay wefti uu horkacayo Raage Garaad C/Qani garaad jaamac oo ka soo kicitamay Dalka Dibadiisa Next PostDoor-roonihii Da'dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) (1956kii - 1987kii) Qaybtii 4aad